सरकार र शाल्ट ट्रेडिङलाई प्रश्न,नेपालमा ढिके नुन प्रयोगको अन्त्य कहिले हुन्छ ? « Arthatantra.com : A Complete Economic News Portal From Nepal.
सरकार र शाल्ट ट्रेडिङलाई प्रश्न,नेपालमा ढिके नुन प्रयोगको अन्त्य कहिले हुन्छ ?
डोटी। डोटीका अधिकांश ठाउँमा अझै ढिके नुनको प्रयोग बढी रहेको छ । जिल्लाका ग्रामीण भेकमा बसोबास गर्ने जनताले ढिके नुनलाई बढी मात्रामा प्रयोग गर्ने गरेका हुन् । ढिके नुनको सट्टा आयोडिन नुन प्रयोग गर्नाले मानव स्वास्थ्यमा गुणात्मक रुपमा बढी फाइदा मिल्ने भएता पनि यहाँका जनता ढिके नुन नै प्रयोग गर्दछन् । आफूले बारीमा फलाएको भटमास साटेर ढिके नुन लैजाने कृषकको अहिले ताँती लागेको छ ।
भटमास एक केजीको तीन केजीसम्म ढिके नुन साट्न पाइन्छ, मूल्य कम छ, गाईवस्तुलाई खुवाउनका निम्ति सजिलो छ, चवरा चौताराका कृषक चक्र बमले भने । पहिलेदेखि नै ढिके नुनको प्रयोग गर्ने गरेका कारण उपभोग गर्नमा पनि सजिलो लाग्ने उनले बताए ।
केदारअखडा गाविस चालिसका शेरबहादुर बम पनि करिब तीन घन्टाको पैदल यात्रा गरी पिठ्युमा भटमासको भारी बोकेर ढिके नुन साट्न चवरा पुगे । एक प्रश्नमा उनले ढिके नुन हामी जस्ता कृषकका निम्ति सस्तो र कम मूल्यमा पाइने हुँदा यसकै प्रयोग बढी गर्ने गरेको बताए । आयोडिन नुन पनि खान्छौं तर ढिके नुन जस्तो स्वाद त्यसमा नभएको उनको बुझाइ छ ।
साल्ट ट्रेडिङ डोटीका बिक्रेता प्रकाश विकका अनुसार अधिकतम मात्रामा ग्रामीण भेकमा ढिके नुन बढी मात्रामा बिक्री भइरहेको छ । मागअनुसार हामी ढिके नुन नै बढी मात्रामा पठाउने गर्दछौं । ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनता गाई, भैँसी, गोरु, बाख्रालाई खुवाउनका निम्ति पनि बढी मात्रामा ढिके नुनको नै प्रयोग गर्ने गर्दछन्, उनले भने ।
सरकारले दुई बालबालिकाको चिह्न अङ्कित आयोडिनयुक्त नुनको प्रयोग गरौँ भनेता पनि त्यस क्षेत्रका सर्वसाधारणहरुमा अझै चेतनाको कमी रहेको पाइएको छ ।
प्रकाशित मितिः २०७३ पुस २६
काठमाडौंमा मोनो रेल निर्माण गर्न कस्सिए मुख्यमन्त्री पौडेल, मलेसियन कम्पनीसंग…
तरकारी किन्न वा बेच्न जानु अघि थाहा पाउनुहोस् आजको थोक मुल्य विवरण
काठमाडौं । तपाई तरकारी किन्न वन बेच्न जाँदै हुनुहुन्छ भने कालिमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार